Shiraplant Lasagna: 7 Inonaka Mapepa Ekugadzira Pamba Nhasi!
Zvokudya	 11 January 2019
Kune avo vanofarira eggplant, kudzidza kugadzira mabikirwo matsva nemuriwo uyu inogara iri pfungwa yakanaka. Mune ino chinyorwa, iwe unenge uine akati wandei eggplant lasagna mapapiro, kubva pane akakodzera kune iyo izere neinofadza uye zvakare nemafuta zvigadzirwa.
Mune inotevera misoro iwe uchave nekwaniso kune ese aya maresipi. Tarisa imwe neimwe yadzo uye sarudza yaunoda kuita pamba!
Shiraplant lasagna inokodzera
Iyi iresipi inoshamisa kune iwe unorarama hupenyu hwekusimba uye uchida kuve neyakaenzana, kusiyaniswa, kudya kwakaringana, pasina kudya iwo iwo iwo madhishi mazuva ese. Ona zvinoshandiswa uye kuti ungagadzirira sei!
300 gramu yechiedza mozzarella
1 shredded chicken zamu
Chinhu chekutanga chekuita kubika zamu rehuku wobva waripwanya. Iwe unocheka eggplant muzvidimbu kuitira kuti ive "mukanyiwa" we lasagna.
Kana uchinge watemwa, isa pekutanga rukoko rwemaisiplant slices pabheka. Wedzera mozzarella, tomato muto, shredded huku uye dzokorora mashandiro kusvikira zvese zvigadzirwa zvapera. Kuguma kunofanirwa kunge kuri kweiiiiiiiiiiiiiiii uye muto kumusoro.
Ipapo iwe unofanirwa preheat hovhoni uye isa iyo lasagna yekubika pane yakaderera kusvika kune yepakati kupisa kweinenge awa. Fukidza nechiedza cheparmesan chizi, kana uchida, uye unogona kuzvidya.
[junkie-alert style = "green"] Zvakadii nezvekudzidza zvinonaka zvekubika senge izvi uye uchiri kudzikira uremu? Wobva watarisa 101 LOW CARB RECIPES uye uve nemuviri wawaigara uchirota usina kumira kudya! [/ junkie-yambiro]
Iyo vegan recipe inoenda isina chero chinhu chemhuka, saka izvo zvinoshandiswa zvinotevera.
300 magiramu e vegan chizi
Muchena muto nemakwenzi emakwenzi
Ita sauces kutanga. Tomato inogadzirwa nematomatisi matatu, gariki, hanyanisi nemafuta mashoma ekuzadza. Kana iri sosi chena, iwe unozoda mukaka weiyo cashew nati yakarohwa nezviyo. Tora zvese uende nazvo kumoto umhanyise kusvikira zvasvipa. Iwe unogona kuisa nutmeg iyo inonaka kwazvo.
Nemisumbu yagadzirira, inguva yekuungana. Wedzera eggplant, tomato muto, vegan cheese uye chena muto. Nyora iyo montage neiyo eggplant uye tomato muto. Iwe unogona kusasa grated cashew nzungu kupedzisa.
Verenga zvakare zvinonaka uye zvine hutano zvinoshanda mapureti!
Mashizha lasagna nehuku
Iyo yekubheka yakakodzera yawakaona mumusoro wekutanga ine shredded huku uye inonaka. Zvamunogona kuchinja kuwedzera fatter cheese, kana kuita mwaka unonaka kwazvo wehuku.
Zano ndere kumisikidza nyama yakakangwa nesafironi uye curry. Iyo inonaka kwazvo. Shandisa zvakare muto wegariki uyo unonaka. Ingo chenjera kuti usapfuure-mwaka uye huku inewo munyu.
Kuzadza nyama yakakangwa
Kana iwe uchizogadzira sunagna yako yekudyara nevhu remombe, zano racho nderekutsva nyama neonion negariki nezvinonhuwira zvekuravira kwako wobva wawedzera kune muto wemadomasi wawakagadzirira. Ipapo iwo matanda anogona kuva eggplant, chizi, ham uye bolognese muto. Pedzisa neiyo eggplant uye muto weduri, uye kusasa imwe inonaka yeParmesan chizi.
Shiraplant lasagna nemuchena muto
Muchena muto unoenda zvakanaka nechero yeaya mapepeti uye zviri nyore kwazvo kugadzira. Kugadzirira muto muchena chete mukaka, chibage, chena mhiripiri, munyu uye zvishoma nutmeg. Shingairira pamusoro pemhepo yakadzika kusvika yagwamba uye ndizvozvo, unogona kuzviparadzira pane yako eggplant lasagna.
Zucchini uye eggplant lasagna
Zucchini mumwewo muriwo unogona kushandiswa se "pasita" ye lasagna. Ne eggplant iwe unogona kugadzira yakavhenganiswa "mukanyiwa". Rukoko rweyiplantplant uye nhete yezucchini. Zvinonaka futi.
Kuzadza kunoitwa ne ricotta
Iyo chizi iwe yauchazoshandisa mune yakakodzera recipe inogona kutsiva ricotta, kana uchida. Iyo inonaka kwazvo uye haichinje iwo dhizaini zvachose.
Une macalorie mangani?
Izvo zvese zvinoenderana neresipi yauri kuzoita. Inotangira pa160 kusvika 290 macalorie, iyo yakanyanya uye vegan yakareruka, nepo iyo ine sauces mbiri, nyama nezvinonhuwira zvinorema.
Kana iwe waifarira mbichana mbichana lasagna mabikirwo, igovera ichi chinyorwa pane ako masocial network!
Topiramate: Dzidza zvakawanda nezve mhedzisiro yemushonga uyu!
mhanyisa metabolism yako
Maitiro ekudzivirira nhumbu: Ziva iwo makuru
Eyelashes enhema: Maitiro ekuisa uye kuenzanisa makeup